Man Utd oo aaminsan in goolhaye Van Der Sar uu badalikaro Rui Patricio – SBC
Man Utd oo aaminsan in goolhaye Van Der Sar uu badalikaro Rui Patricio
Red Devils ayaa aaminsan in goolhayahooda da’da ah uu badali karo goolhayaha kooxda Lisbon.
Madaxweynaha kooxda Man U ayaa ka dhawaajiyay in maanta ay uu duuli doonaan magaalada caasimada ah ee Lisbon si ay wadahadala ka fool ka fool ah ula yeeshaan maamulka sar sare ee kooxda Lisbon iyo wakiilka goolhaye Rui Patrocio.
Kooxda shayaadiinta cas cas ayaa dul dhigta helitaankooda goolhaye Rui qiima lacageed oo dhan 7 milyan oo Euro, balse kooxda reer Portuguese kuma qanacsana in gool hayahooha uu qiimahan ka gabaxo gagida Sporting Clube Portugal qiimahan.
Kooxd Sporting Lisbona ayaa ku doonaysa goolhaye Rui Patrocio in ay ka macaashto lacag dhan 12millyan oo Euro.
Particio ayaa leh 23 sano oo khibrada waana tan keentay in Untd ay ka doorbiday goolhaya ay sanadadaan ku jaahwareertay ee De Gea oo asagu la qiimayay 20 sano oo khibrada waxuuna kooxdiisa u saftay kooxdiisa Patricio 167 kulan oo calami ah.
Si kastaba ha ahaatee Man United ayaa kala dooran doonta labada goolhaye ee De Gea oo u ciyaara kooxda Atlatico Madrid iyo Rui Patricio oo goolhaya wakhigaan u caleemasaaran kooxda Man una ilaaliya shabaqa kooxda Sporta Lisbon ee reer Portugal.
SBC International Sports News